“Hadii ay ku guuleysato Liverpool Premier League, waxba kama badali doonto xanuunka aan dareemayo” – Steven Gerrard – Gool FM
“Hadii ay ku guuleysato Liverpool Premier League, waxba kama badali doonto xanuunka aan dareemayo” – Steven Gerrard
(England) 8 March 2019. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Steven Gerrard ayaa sheegay in wali uu dareemayo niyadjabkii kasoo gaaray fursadii ay isaga lumiyeen inay ku guuleystaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2013-2014, xiligaas oo ay si weyn ugu dhawaadeen inay gacanta ku dhigaan.
Dhinaca kale Steven Gerrard ayaa u rajeeyay kooxda Jürgen Klopp ee Liverpool inay xili ciyaareedkan ku guuleystaan horyaalka Premier League.
Steven Gerrard ayaa dhulka ku dhacay isla markaana lumiyay kubada, 5 sano kahor, taasoo fursad u siisay Demba Ba inuu u dhaliyo kooxda Chelsea goolka daah furka, xili kulankaas uu ku soo idlaaday 2-0 ay guusha ku raacday kooxda Blues, waxaana gabi ahaan meesha ku burburtay rajadii ay Liverpool ka qabtay inay ku guuleysato horyaalka oo ay xiligaas qaaday Manchester City.
Liverpool ayaa haatan leh 70 dhibcood, waxayna 1 dhibac ka hooseysaa Manchester City, kahor 9 kulan dhamaadka xili ciyaareedka, Gerrard ayaana u rajeeyay kooxdiisa hore inay adeegsadaan degenaan, si ay gacanta ugu dhigaan koobka Premier League, kaidb mudo dhan 29 sano.
“Dhaawacaas ilaa iyo maanta igama uusan bogsoon, ma hubo inaan ka gudbi doono, sababtoo ah ma baddali karo wixii dhacay”.
“Taasi wax saameyn ah kuma yeelaneyso kooxda haatan ee Liverpool, waan eegaa xili kasta shaxda kooxda, sababtoo ah waxaan ku leeyahay saaxiibo”.
“Waxaan rajeynayaa in Liverpool ay u qaado horyaalka sababa la xiriira taageerayaasha, iyo aniga ka taageera ahaan, balse taasi waxba kama badali doonto dhaawaca aan qabo”.
Muxuu ka yiri Maurizio Sarri guushii weyneed ay xalay ka gaareen kooxda Dynamo Kyive??